५ सय चो’रेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला कसरी भए यति धनी, कति छ उनको सम्पत्ति ? - jagritikhabar.com
५ सय चो’रेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला कसरी भए यति धनी, कति छ उनको सम्पत्ति ?
पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्यान हुन्छ।
जसको मूल्य ५२ लाख रहेको छ। उनले तलब भने महिनाको ८० देखि १ लाखसम्म रहेको बताइएको छ। त्यस्तै उनको जम्मा सम्पत्ति भने १५ करोड जति रहेको बताइएको छ।यो कुरा उनले नोभेम्बर ७ , २०२० को ग्ल्यामरगफको एपिसोडमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रकाश सुबेदीले घरबाट बुवाको ५०० चोरेर काठमाण्डौ छिरेको धमलासँग कसरी यत्रो सम्पति र पहुँचबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर ऋषि धमलाले त्यसको उतर मेहनत गर्ने जो कोहिले पनि सम्पत्ति कमाउन सक्छ भन्दै जवाफ दिएका थिए।